Workshops – IJBS
Thematic workshops are our central activity. We assemble groups of scholars from all over Burma, including its ethnic peripheries, for intensive exchange of papers and views in Burmese, English and other languages of Myanmar. We regard the community-forming process of identifying the wide range of invitees, the exchanges at the workshop, and the editorial meetings as at least as important as the mere fact of holdingaworkshop and publishingajournal. The implicit agenda of each of these workshops and thematic journals is to coalesce the nucleus of young scholar-activists who will continue to meet, debate, and write, and perhaps form an independent group of their own. We aim for the workshops and journal to be catalysts for scholarly community-making more than ends in themselves.
The next workshop will be on the media, to be held in Chiang Mai in March, 2022. To view previous and future workshops, use the menu above.
အကြောင်းအရာအလိုက် စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဂျာနယ်၏အဓီကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဖြစ်သည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် တင်သွင်းဖတ်ကြားသည့်စာတမ်းများနှင့် လည်းကောင်းတို့အပေါ်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားသည့်အမြင်များကို ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ် နှင့် အခြား မြန်မာဘာသာစကားများဖြင့် အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသား ဒေသများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ သုတေသီများကိုဖိတ်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်အသိပညာဖလှယ်မှုများနှင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကယူဆပါသည်။ အဆိုပါ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အကြောင်းအရာအလိုက် ဂျာနယ်တစ်ခုစီ၏ အကျုံးဝင်သည့် အစီအစဉ်မှာ ဆက်လက်တွေ့ဆုံ သုတေသနပြု ရေးသား ဆွေးနွေးကြမည့် လူငယ်သုတေသီများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ အင်အားကို ပေါင်းစပ်ကာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သီးခြားလွတ်လပ်သော သုတေသနအဖွဲ့များဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်စေရန်နှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများဖန်တီးမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ချင်းမိုင်တွင် ကျင်းပမည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလမြန်မာမီဒီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်မှ ကျင်းပခဲ့ပြီးသောစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် နောင်တွင်ဆက်လက်ကျင်းပမည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကြည့်ရှုရန် website စာမျက်နှာ ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသော menu ပါခလုပ်များကိုနှိပ်ပါ။